Tsy dia misy volam-panafena mora ampiasaina ho an'ny maso China Manufacturer
Description:Toeram-ponenana tsy misy sisan-taolana,Volavava mora vetivety ho an'ny maso ivelany,Toeram-pandrosoana Hydrofluoroether
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Famenoana ny vahaolana amin&#39;ny alàlan&#39;ny sary mihetsika > Tsy dia misy volam-panafena mora ampiasaina ho an&#39;ny maso
Hydrofluoroether Easy Volatility Tsy misy ambiny mafonja amin'ny alàlan'ny sary mihetsika
Hydrofluoroether ny vovobony dia vokatra avy amin'ny tontolo iainana, Easy Volatility Detergent ho an'ny loko ivelany, sady tsy misy loko sy tsy misy rongony, sady tsy misy poizina sy tsy misy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny hydrofluoroether cleaning agent dia tsy fahampian-tsakafo avo lenta amin'ny dielectric, ny tebiteby ambany dia ambany, ny hodi-jiro ambany, ny tsy fahampian-tsakafo tsy misy fialana ary ny fahamendrehana tsara. Ny HFE hydrofluoroether dia mety hiparitaka sy hiparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny poreau isan-karazany, ary misy vokany tsara amin'ny famonoana, ny fampangatsiahana, ny famafazana sy ny fanadiovana. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy, ny solika, ny LCD ary ny sarotra sns., ary azo ampiasaina ihany koa mba handotoana sy handotoana, fanandramana amin'ny fanodinana elektronika na fisedrana amin'ny rivotra, ary solvent.
Ny toetra mampiavaka ny Chemical Clean Solutions:
Sakafo, fitehirizana ary fitaterana:
Toeram-ponenana tsy misy sisan-taolana Volavava mora vetivety ho an'ny maso ivelany Toeram-pandrosoana Hydrofluoroether